Imidumo eyisikhombisa iphuma esihlalweni sobukhosi, izamazamisa izulu nomhlaba, igumbuqela izulu nomhlaba, bese inkeneneza esibhakabhakeni! Umsindo uhlaba ngendlela yokuthi abantu abakwazi ukuwubalekela nokuwucashela. Ukuphazima konyazi nokuduma kwezulu kuyathunyelwa, kugumbuqela izulu nomhlaba ngokuphazima kweso, futhi abantu baseduze nokufa. Bese, uzamcolo onesihluku wemboza izulu nomhlaba ngesivinini sonyazi, wehla esibhakabhakeni! Emagunjini asemajukujukwini omhlaba, njengozamcolo ugobhozela kuyo yonke imigojana nemisele, akusali ngisho nelilodwa ibala, futhi ngenkathi uhlanza konke kusuka ekhanda kuya ozwanini, akufihleki lutho kuwo noma kube khona umuntu ongawukhoselela. Ukuduma kwezulu, njengokukhanya okwethusayo kokuphazima konyazi, kwenza abantu baqhaqhazele ngokwesaba! Inkemba ebukhali nxazonke igawula amadodana okuhlubuka, futhi isitha sibhekene nenhlekelele singenampheme nhlobo esingabalekela kuwo, amakhanda awo ezungeza esihlukwini sesiphepho, futhi, beshayeke baquleka, bawela emanzini agobhozayo befile ukuze bemuke. Bafa kalula bengenandlela nhlobo yokuphephisa impilo yabo. Imidumo eyisikhombisa isuka Kimi futhi ihambisa inhloso Yami, ewukushaya amazibulo aseGibhithe, ukujezisa ababi nokuhlanza amabandla Ami, ukuze onke axhumane ngokusondelana, acabange futhi enze ngendlela efanayo, futhi abe nenhliziyo eyodwa Nami, futhi ukuze onke amabandla emhlabeni akhiwe abe ngelilodwa. Yilena inhloso Yami.
Lapho izulu liduma, amagagasi okulila ayaqala. Abanye bavuswa ebuthongweni babo, bese, bethuke kakhulu, bethungatha ekujuleni kwemiphefumulo yabo bese bephuthuma emuva phambi kwesihlalo sobukhosi. Bayayeka ukulutha nokukhohlisa kanye nokwenza amacala, futhi asedlulile kakhulu isikhathi sokuba abantu abanjalo bavuswe. Ngibuka ngisesihlalweni sobukhosi. Ngibuka ekujuleni kwezinhliziyo zabantu. Ngisindisa labo abangilangazelela ngobuqotho nangokuzimisela, futhi ngiyabahawukela. Ngizosindisa kuze kube phakade labo abangithanda ezinhliziyweni zabo ngaphezu kwakho konke okunye, labo abaqonda intando Yami, nabangilandela kuze kube sekupheleni kwendlela. Isandla Sami siyobabamba ngokuphepha ukuze bangabhekani nalesi simo futhi bangalimali. Abanye, lapho bebona lo mbono wonyazi oluphazimayo, banosizi ezinhliziyweni zabo abayokuthola kunzima ukuluchaza ngamaphimbo, futhi ukuzisola kwabo sekufike emva kwendaba. Uma bephikelela ngokuziphatha ngale ndlela, sebedlulwe yisikhathi kakhulu. O, konke, konke! Konke kuyokwenziwa. Lokhu ngenye yezindlela Zami zokusindisa. Ngisindisa labo abangithandayo futhi ngibulale ababi. Ngakho umbuso Wami uyoqina futhi uzinze emhlabeni futhi bonke abantu bazo zonke izizwe kuwo wonke umhlaba nezulu bayokwazi ukuthi ngiwubukhosi, ngiwumlilo oqothulayo, ngiwuNkulunkulu othungatha inhliziyo yawo wonke umuntu ephakathi ekujuleni. Kusuka kulesi sikhathi kuya phambili, ukwahlulela kwesihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe kwambulwa obala ezihlweleni futhi kumenyezelwa kubo bonke abantu ukuthi ukwahlulela sekuqalile! Akungabazeki ukuthi bonke abangakhulumi lokho okusezinhliziyweni zabo, labo abezwa benokungabaza futhi abangalokothi baqiniseke, labo abachitha isikhathi, abaziqondayo izifiso Zami kodwa abangazimisele ukuzenza, kufanele bahlulelwe. Kufanele nihlole ngokucophelela izinhloso nezizathu zenu, futhi nithathe indawo yenu efanele, nenze ngokuphelele lokho engikushoyo, nazise okuhlangenwe nakho empilweni yenu, ningenzi ngomdlandla ngaphandle, kodwa yenzani izimpilo zenu zibe ngezikhulile, ezivuthiwe, ezizinzile nezinokwazi, futhi kulapho kuphela niyoba ngabafuna inhliziyo Yami.
Yenqabani izinceku nemimoya emibi kaSathane okuphazamisa futhi kubhidlize lokho engikwakhayo noma yimaphi amathuba okusebenzisa izinto ukuze kusizakale khona. Kufanele kuvinjwe futhi kuthiywe kakhulu futhi kungabhekanwa nakho kuphela ngokusetshenzisa kwamazwi abukhali. Okubi kakhulu kukho kufanele kusishulwe ngokushesha ukuze kungabi yingozi esikhathini esizayo. Futhi ibandla liyopheleliswa, ngeke kube nokukhubazeka nhlobo, futhi liyoba nempilo, ligcwale ukuphila namandla. Emva konyazi oluphazimayo, ukuduma kwezulu kuyezwakala. Akufanele ninganaki, futhi akufanele niyeke kodwa kufanele nenze konke eningakwenza ukuze nisondele, futhi nakanjani niyokwazi ukubona lokho isandla Sami esikwenzayo, engikuzuzayo, engikulahlayo, engikuphelelisayo, engikusiphulayo, nengikuwisayo. Konke lokhu kuyokwambuleka phambi kwamehlo enu ukuze nikubone ngokucacile ukuba namandla onke Ami.
Kusuka esihlalweni sobukhosi kuya ekugcineni lwalo lonke izulu nomhlaba, imidumo eyisikhombisa iyankeneneza. Iqembu elikhulu labantu liyosindiswa futhi lithobe phambi kwesihlalo Sami sobukhosi. Belandela lokhu kukhanya kokuphila, abantu bafuna indlela yokuphila futhi abakwazi ukwenza okunye ngaphandle kokuza Kimi, ukuguqa phansi bakhonze, imilomo yabo imemeza igama likaNkulunkulu wangempela onamandla onke, futhi bezwakalise ukunxusa kwabo. Kodwa kulabo abamelana Nami, abantu abaqinisa izinhliziyo zabo, izulu liduma ezindlebeni zabo futhi ngaphandle kokungabaza kufanele babhubhe. Lokhu kalula kungumphumela wokugcina kubona. Amadodana Ami athandekayo anqobile azohlala eSiyoni futhi bonke abantu bazobona lokho abazokuthola, futhi inkazimulo enkulu iyobonakala phambi kwenu. Lokhu ngempela kuyisibusiso esikhulu ngokukhethekile ubumnandi baso okulukhuni ukububeka ngamazwi.
Abantu bonke mabazi, futhi benze kwaziwe emaphethelweni omhlaba nezulu, ukuze wonke umuntu azi. UNkulunkulu uSomandla unguNkulunkulu wangempela oyedwa, bonke ngokulandelana bayoguqa ngamadolo ukuze bakhonze Yena futhi ngisho abantwana abasanda kufunda ukukhuluma bayomemeza bathi “Nkulunkulu uSomandla”! Lezo zikhulu eziphethe amandla ziyobona ngamehlo azo uNkulunkulu wangempela ebonakala phambi kwazo futhi ziyowa phansi ekukhonzeni, zicela umusa nokuthethelelwa, kodwa lokhu sekwedlulwe yisikhathi njengoba isikhathi sokubhubha kwazo sesifikile; kufanele kwenzelwe bona: ukubagwebela kwalasha ongalinganiseki. Ngiyofikisa yonke inkathi ekugcineni, futhi ngiqinise umbuso Wami ngokwengeziwe. Zonke izizwe nabantu kuyothoba phambi Kwami kuze kube phakade!
UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele I Ngabe Umsebenzi kaNkulunkulu Ulula Njengoba Umuntu Ecabanga? Isahluko 1 Lapho Nibona Umzimba KaJesu KaMoya Kuyoba Lapho UNkulunkulu Esenze Izulu Nomhlaba Kabusha